ဆိုးရော့စ်က ဗြိတိသျှအစိုးရသည် ပေါင်စတာလင်တန်ဖိုးကို လျှော့ချလိမ့်မည်ဟု မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုးရော့စ်သည် ဆိုးရော့စ်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြင်ပလူမှုအသင်းအဖွဲ့၏ သဘာပတိဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်ရေးကောင်စီ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သူသည် ၁၉၈၄-၈၉ အတွင်း ဟန်ဂေရီတွင် ကွန်မြူနစ်စနစ်မှ အရင်းရှင်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲရာတွင် ထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍတွင် အဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဘူဒါပတ်စ်ရှိ Central European တက္ကသိုလ်ကို အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် ဥရောပတွင် အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်အောင် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နှင်းဆီတော်လှန်ရေး၏အောင်မြင်မှုတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော ရုရှားနှင့် အနောက်ဘက်ဒေသများမှ စူးစမ်းရှာဖွေသူများက ဂျော်ဂျီယာရှိ ပြင်ပလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အစီအစဉ်များကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျုဘုရှ်၏ မဲဆွယ်ပွဲတွင် အရေးနိမ့်စေရန် ပိုက်ဆံအမြောက်အမြားလှူဒါန်းကာ ကြိုးစား အားထုတ်ခဲ့သူအနေနှင့် သူ့ကိုသိကြသည်။ ၂၀၁ဝ တွင် သူသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်ထောင်စုတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဆေးခြောက်ကို အဆိုပြုသည့် စည်းမျဉ်း ၁၉ ကို ထောက်ပံ့ရန် ဒေါ်လာ ၁ သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ရှေးဦးစုပေါင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့၏ သဘာပတိ ပေါလ်ဗိုကာသည် ဆိုးရော့စ်၏ ငွေကြေး၏အတတ်ပညာ အမည်ရှိသည့်စာအုပ်တွင် ဤသို့အမှာစာရေးသားခဲ့သည်။ ဂျော့ချ် ဆိုးရော့စ်သည် အလွန်တရာမှအောင်မြင်ကြီးကျယ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးအဖြစ် အမှတ်အသားပြုနိုင်ခဲ့ပြီး သူ၏အလွန်များပြားလှသောအောင်မြင်မှုများသည် အခြေအနေတစ်ရပ်မှတစ်ရပ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အားပေးလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံများကို 'ချုပ်ချယ်မှုကင်းမဲ့သော လူအဖွဲ့အစည်း'ဖြစ်လာစေခဲ့ပြီး လွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် ပိုအရေးကြီးသည့် သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိသော အတွေးအခေါ်သစ်များအပြင် မတူညီသော တွေးခေါ်ပုံနှင့်အပြုအမူများကိုပါ အချုပ်အချယ်ကင်းမဲ့စေခဲ့သည်။
၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဂျူးလူမျိုးများအပေါ် အာဃာတကြီးမားလာခြင်းအပေါ် တုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့် မိသားစုအမည်ကို Schwartz မှ Soros သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တိဗာဒါက အမည်သစ်သည် ရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်ဖတ်လျှင်လည်း အသံတူသော စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်လည်းပြည့်ဝသောကြောင့် ထိုအမည်သစ်ကို နှစ်သက်လှသည်။ အမည်၏အသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်ကို Kaufman ၏ ကိုယ်ရေးစာအုပ်တွင် မဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ဟန်ဂေရီဘာသာတွင် ဆိုးရော့စ်၏အဓိပ္ပာယ်မှာ အောင်မြင်သူကိုရာထူးခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အက်စ်ပါရန်တိုဘာသာတွင် "လျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခြင်း" ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်တော့ သူသည် တစ်ဦးနှင့်အများပိုင် လန်ဒန်စီးပွားရေးဘဏ်တွင် အခြေခံဝင်ခွင့် အဆင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ မိသားစုသမိုင်းအရ သူ၏ဝမ်းကွဲတော်သူ ကာရွန် အန်လန်ဒါ သည် နယူးရော့ခ်တွင်ရှိသည်။
၁၉၉၇ခုနှစ် အာရှတိုက်ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲပေါ်ပေါက်ချိန်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီဟာ ဘင် မိုဟာမက် က ဆောရော့စ် သည် မြန်မာနိုင်ငံကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အဖြစ် လက်ခံခဲ့သော အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအား အပြစ်ပေးရန် သူ၏ ကြွယ်ဝမှုကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ဂျူးလူမျိုးဆန့်ကျင်ရေးသမိုင်းကိုလိုက်၍ မဟာသီဟာ သည် ဆိုးရော့စ်၏ ဂျူးဘာသာနောက်ခံ အခြေအနေကို လေ့လာစုံစမ်းပြီး (ငွေကြေးအတက်အကျကိုဖန်တီးခဲ့သည့်ဂျူးတစ်ယောက်) ဆိုးရော့စ်သည် ဂျူးလျှို့ဝှက်ကြံစည်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသတွင် ကြိုးဆွဲနေကြောင်း သဘောပေါက်သွား သည်။ ၉ နှစ်ကြာသွားပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မဟာသီဟာသည် တောင်းပန်ခဲ့ပြီး သူ၏စွဲချက်များကို ပြန်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာအရင်းရှင်စနစ်ဂယက်တွင် ပြင်ပလူမှုအဖွဲ့အစည်းသည် အန္တရာယ်အတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး ဆိုးရော့စ်သည် ဂယက်ကာလအတွင်း သူ၏အခန်းကဏ္ဍကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
၂၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် The Washington Post သတင်းစာ၏ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဆိုးရော့စ်က သမ္မတ ဂျော့ချ် ဒဗလျူ ဘုရှ်ကို ရုံးမှထုတ်ပယ်ခြင်းသည် သူ့ဘဝ၏အဓိကအာရုံစိုက် ရာဖြစ်ပြီး ရှင်သန်ခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်း၏အရေးအရာတစ်ခုဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
"အခွန်နှင့်ငွေကြေးစည်းမျဉ်းဖာက်ဖျက်ခြင်း"ကြောင့် အစိုးရထံတွင် ဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ ၃ သန်း ပေးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉ရ တွင် ဆိုးရော့စ်သည် ဘယ်လာရပ်စ်ရှိ သူ၏အဖွဲ့အစည်းကို ပိတ်ခဲ့သည်။ New York Times သတင်းစာအရ ဘယ်လာရပ်စ်သမ္မတ အလက်ဇန်းဒါး လူကပ်ရှန်ကိုသည် အနောက်ဘက်ဒေသနှင့် ရှရှားရှိ ဘယ်လာရပ်တွင်တည်ရှိသော ဆိုးရော့စ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် အခြားလွတ်လပ်သော NGO အဖွဲ့များကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် မြို့ပြလူ့အခွင့်အရေးကို နှိမ်နှင်းချေမှုန်း ရန်အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းကာ အကြီးအကျယ်ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း ပါရှိသည်။
ဆိုးရော့စ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မြှင့်တင်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရန်ပုံငွေကြေးများ အမြောက်အမြားဖြည့်တင်းခဲ့သည်။
၂၀၀၈ တွင် ဆိုးရော့စ်သည် မူးယစ်ဆေး ၁ အောင်စ (၂၈ ဂရမ်) လက်ဝယ်တွေ့ရှိပါက ရာဇဝတ်မှု မမြောက်ဟူသော မက်ဆာချူးမူးယစ်ဆေးပေါ်လစီလှုပ်ရှားမှုဟု လူသိများသည့် မက်ဆာချူး ပြည်နယ်ရှိ အောင်မြင်သွားသည့် လျှို့ဝှက်မဲလမ်းစဉ်ကို ဒေါ်လာ ၄ သိန်း ကူညီခဲ့သည်။
ဆိုးရော့စ်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာအမှုများ မကျူးလွန်သူများ အတွက် ထောင်ကိုဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းကို တိုးချဲ့ကာ မအောင်မြင်လိုက်သော လျှို့ဝှက်မဲလမ်းစဉ်ဖြစ်သည့် ကယ်လီဖိုးနီးယားစီမံကိန်း ၅ အတွက် ဒေါ်လာ ၁.၄ သန်းကိုထောက်ပံ့ရန် ပြည်သူလူထုကြိုးပမ်းမှုအတွက် လှူဒါန်းခဲ့သည်။
၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ အင်တာဗျူးမှတ်တမ်းများအရ marijuana သည် စွဲလမ်းနှစ်သက်မှု နည်းသော်လည်း ကလေးနှင့်ကျောင်းသားများအတွက် မသင့်တော်ဟု ဆိုးရော့စ်က ထင်မြင်ကြောင်း သိရသည်။ သူသည်လည်း ထိုနှစ်များအတွင်း မသုံးစွဲခဲ့ပေ။
လိုက်လျောညီထွေတုံ့ပြန်မှု၊ ငွေကြေးဈေးကွက်နှင့် စီးပွားရေးသီအိုရီ[ပြင်ဆင်ရန်]
အစိုးရဖက်က အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အပေါင်းလက်ခဏာဆောင်သည့် ရလဒ်ကိုဟု သတ်မှတ်ပြီး ပထမဆုံးအိမ်ပို်င်ရှင်နှင့် အခြားဘဏ္ဍာရှေးဌာနခွဲများကို ဦးစားပေးအိမ်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည့် အိမ်ဝယ်စေရန် လွှမ်းမိုးမှုများကို ချီးမြှင့်ကာ အိမ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း သည် ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ရောက်စေသည်။ ဈေးနှုန်းများသည် လျင်မြန်စွာတက်လာပြီး ငှားရမ်းမှုအဆင့်အတန်းများ ရပ်တန့်နေခဲ့သည်။
"တရုတ်နိုင်ငံသည် သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ဆောင်ရွက်ရင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် သူတို့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏အမှာနှင့် အခြားသူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း တာဝန်ယူရန် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။"
၁၉၈ဝ ခုနှစ်များတွင် (၁၉၉၄ မှ ၂၀၀ဝ ထိ) Fidesz ၏ဥက်ကဌဖြစ်သူ Viktor Orban၊ (၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၂၊ ၂၀၁ဝ မှနောက်ပိုင်းထိ) ဝန်ကြီးချုပ်၊ (၂၀၀ဝ ခုနှစ်) Fidesz ၏ဥက်ကဌ Laszlo Kover၊ (၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၂ ထိ) လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် (၂၀၁ဝ ခုနှစ်) ဟန်ဂေရီ အမျိုးသား စုရုံးမှုအဖွဲ့၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ သည် ဆိုးရော့စ်စကောလားရှစ် ရရှိခဲ့သူများဖြစ်ကြသည်။
ဂျော့ချ် ဆိုးရော့စ်သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ကတည်းကစပြီး အခုထက်ထိ မြန်မာ့အရေးအတွက် နှစ်စဉ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂သန်း ကို လှူဒါန်းပေးနေသော သူဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလ ထုတ် Forbes မှာ ရေးသားချက်အရ ဂျော့ချ် ဆိုးရော့စ်သည် အမေရိက၏အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ဦးထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းထဲတွင် သူသည် နံပါတ် ၄၆ မှာ လိုက်ပါသည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာ သူလှူဒါန်းခဲ့သော ငွေတွေဟာ ဒေါ်လာပေါင်း ၈ ဘီလီယံ ကျော်နေပြီ မို့သူ့ကို အလှူအတန်းရက်ရောသူတစ်ဦး အဖြစ် လူသိများကြသည်။
Soros Fund Management 13F filing and Portfolio Activities Archived 12 June 2010 at the Wayback Machine.
Forbes.com: Forbes 400 Richest in America Archived5May 2012 at the Wayback Machine.
George Soros in SEC Filings Archived 1 March 2010 at the Wayback Machine.
In depth review of The New Paradigm*Why Does Soros Bite Hand That Feeds Him? Archived 24 April 2010 at the Wayback Machine. in Investor's Business Daily
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျော့ချ်_ဆိုးရော့စ်&oldid=731689" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၂၂:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။